Maraykanka, 11 November 2016
Aragtida Soomaalida London ee Doorashada Trump
Donald Trump ayaa loo doortay inuu noqdo madaxweynaha cusub ee Mareykanka kadib markii uu ka adkaaday Hillary Clinton.
Mareykanka: Weerarkii Gaalkacyo Laguma Beegsan Shabaab
Mareykanka ayaa tilmaamay in maleeshiyo deegaanka aha oo aan Shabaab aheyn weerarkaasi lagu dilay, sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee Reuters.
Dibadbaxyada ka Dhanka Ah Trump oo Weli Socda
Tobanaan kun oo qof oo ku nool New York illaa California ayaa maalintii saddexaad buuxiyey waddooyinka magaalooyinka waa weyn ee Mareykanka si ay uga dibadbaxaan doorashada madaxweynaha 45-aad ee Mareykanka Donald Trump.
Obama iyo Trump oo Ku Kulmay Aqalka Cad
Madaxweynaha xilka kasii degaya ee Maraykanka Barack Obama ayaa Aqalka Cad ee looga arrimiyo Maraykanka kusoo dhoweeyey Madaxweynaha la doortay Donald Trump.
Clinton: Waan la Shaqeynayaa Trump
Hillary Clinton oo ahayd musharrixii Dimoqraadiga ee looga adkaaday doorashaday, ayaa taageerayaasheeda ugu baaqday inay madaxwynaha la doortay Donald Trump ay la shaqeeyaan. Madaxweyne Obama wuxu sheegay inay ka taageerayaan Trump sidii uu u guuleysan lahaa.
Falanqeyn: Guushii Donald J. Trump
Madaxa laanta Af-Soomaaliga, Cabdiraxmaan Yabarow ayaa falanqeynaya guushii uu xalay gaaray Donald Trump.
Warbixinno: Guushii Donald J. Trump
Madaxda dunida ayaa u hambalyeeyey Donald J. Trump oo doorashadii Talaadada ee dalka Maraykanka ku guuleystay inuu noqdo madaxweynaha xiga ee Maraykanka.
DEGDEG: Donald Trump Waa Madaxweynaha Maraykanka - AP
Donald Trump ayaa loo doortay in uu noqdo madaxweynaha cusub ee dalka Mareykanka kadib guul aan marnaba laa saadaalin oo uu ka gaaray doorashooyinkii dhacay, sidaasi waxaa werisay wakaaladda wararka ee AP.
Goobaha codbixinta ee gobollada qaarkood ayaa la soo xirayaa, waxaana soo baxaya natiijooyin hordhaca ah.
Tebinteennii Idaacadda Fiidnimo ee Doorashada Mareykanka
Ku soo dhawaada tebinteenna caawa (November 08, 2016) ee doorashada Mareykanka. Waxa si wada jir ah idin la socodsiinaya Ibraahim Xasan Daandurey iyo Maxamed Colaad Xasan.
Dadka Mareykanka oo Madaxweyne Cusub Dooranaya
Dadweynaha Mareykanka ayaa maanta u dareeraya goobaha codbixinta ayaga oo dooran doona madaxweynaha cusub ee dalka hoggaamin doona afarta sano ee soo socota.